Dhabbaha Jaceylka – Tunnel of Love | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Dhabbaha Jaceylka – Tunnel of Love
Dhabbaha Jaceylka – Tunnel of Love
Muqdisho – Dhabbaha Jaceylka waa marin dhabbe-bireed qurux badan oo ku yaalla magaalada Klevan ee dalka Ukraine. Waxaa dhex-mara waddo Tariin oo barabaxan fogaan dhan saddex kilomitir oo ku dhamaada bartanka warshad sameysa biraha iyo fiilooyinka.
Roorku ama tariinku wuxuu kusoo noqdaa saddex jeer dhabbaha si uu alwaax u geeyo warshadda. Si kastaba, geedaha isku dhereran ee laba doc kaga teedsan wadada, ayaa muuqaal cagaaran ka dhigay goobta—taas oo soo jiidata lammaanayaal badan—iyo sidoo kale sawir-qaadayaal usoo hilooba ku il-doogsiga Dhabbaha Jaceylka.
Previous: Sidee Islaamku ugu faafay Hindiya?
Next: Shaqaale banki oo adduun lacageed si kama’ ah ugu riday gudaafadda qashinka
La kulan: Mataanaha ugu da’da weyn dunida